YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, June 11
လေဘေးသင့်ဒေသ ကိုယ်ဝန် ဆောင်များ အခက်ကြုံ
မုန်တိုင်းဒဏ်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ သောင်းနဲ့ချီ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ မွေးဖွားနိုင်ရေးမှာ အခက်အခဲ တွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်း UNFPA ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ပြောလိုက် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာ သီတင်းငါးပတ်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို အကူအညီတွေ ပေးပို့ဖို့ရာ အခက်အခဲတွေတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပြီး အကူ အညီရပြီးသား ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၁ ဒဿမ ၃ သန်းလောက်တို့ ရထားပြီးသားအကူအညီတွေဟာလည်း လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ဦးကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပါတယ်။မုန်တိုင်းသင့် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် တခြား လိုအပ်ချက်တွေ အများအပြား ရှိနေသေးတဲ့ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် လိုအပ်ချက်တွေလည်း ပါဝင်နေတဲ့ အကြောင်း ဒီကနေ့ UNFPA ရဲ့ထုတ်ပြန် ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြ ထားတာပါ။ ကျန်းမာရေး ဌာနတွေ၊ ဆေးရုံတွေနဲ့ ဆေးဘက်ဝန်ထမ်း မလုံမလောက် ဖြစ်နေတာတွေကြောင့် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဘေးကင်းရန်ကင်း မွေးဖွား နိုင်ရေးနဲ့ မမွေးဖွားခင် ပြုစု စောင့်ရှောက်မှုတွေအတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ UNFPA တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ၀ီလီယမ်မ် ရိုင်ယန် (William Ryan) ကပြောပါတယ်။
“မုန်တိုင်းဒုက္ခသည် ၂ ဒဿမ ၄ သန်းနဲ့ အကူအညီတွေမရသေးတဲ့ သန်းနဲ့ချီဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီး အဲဒီထဲက ၁၀၀ ကျော်ဟာ နေ့စဉ်လို မီးဖွားနေကြပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက် မီးမဖွားခင် ပြုစု စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ သန့်ရှင်းပြီး ဘေးကင်းစွာ မွေးဖွားနိုင်ရေးတွေမှာ အရေးတကြီးလိုအပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။” လို့ ၀ီလီယမ် ရိုင်ယန်ကပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဟာ မုန်တိုင်း မတိုက်ခတ်ခင်ကတည်းက အတော်လေး နိမ့်ကျနေခဲ့တာပါ။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်မှုနဲ့ ကလေးသူငယ်မွေးဖွားမှုတို့ဟာလည်း အရင်ကတည်းကကို အန္တရာယ်ကြီးမားနေခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ မုန်တိုင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဌာနတွေ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ ပျက်စီး၊ မီးဖွားပေးတဲ့ သူနာပြုလက်သည်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေကြောင့် အဲဒီ အန္တရာယ်က ပိုပြီး ကြီးမား လာခဲ့ရပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ဘေးကင်းရန်ကင်း မီးဖွားနိုင်ရေးအတွက် UNFPA က ကူညီထောက်ပံ့နေပါတယ်လို့ ၀ီလီယမ်မ်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လက်သည်တွေအတွက် ရာဘာ လက်အိတ်တွေကနေ ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းတွေအထိ ပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ မုန်တိုင်းသင့်မြို့ နယ် ဆယ်မြို့နယ်က လူ ၄၅၀,၀၀၀ စာကို ကူညီဖို့ လုံလောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် လူ ၅၀၀,၀၀၀ စာအတွက် ပစ္စည်းတွေဟာလည်း ဒီသီတင်းပတ်အတွင်းမှာ ရောက်ပါလိ်ိမ့်မယ်လို့ ပြောပါ တယ်။
လက်ရှိမှာ ကုလသမဂ္ဂ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာ အစိုးရဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေ ပါဝင်တဲ့ ပူးတွဲအဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ မုန်တိုင်းကြောင့် အပျက်အစီး အခြေအနေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို တိုင်းတာ စစ်ဆေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။ UNFPA လို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဒီပူးတွဲအဖွဲ့ကနေ စစ်ဆေး တွေ့ရှိမယ့် အပျက်အစီးအခြေအနေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေအတွက် လိုအပ်ချက်တွေက အရေးတကြီးကို ဖြစ်နေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များ အသင်းက ဆရာဝန်တွေကို မုန်တိုင်းသင့်မြို့နယ် နှစ်ခုစီ UNFPA က ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်မှာ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆရာဝန်တွေ ဟာ ရာနဲ့ချီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကို မီးမဖွားခင် စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေပေးခဲ့ကြရာမှာ သူတို့ တွေ့ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ တခုကို ၀ီလီယမ်မ်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး အများအပြားဟာ သူတို့ရဲ့ ခင်ပွန်းသည်တွေနဲ့ သားသမီးတွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ကြရလို့ ကြေကွဲဝမ်း နည်းနေမှုနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထိတ်တလန့် ဖြစ်နေရမှုတွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံဥာဏ်ပေး ကုသမှုတွေကိုလည်း လိုအပ်နေပါတယ်။ အမျိုးသမီး အများစုဟာ ဘယ်မှာ မီးဖွားရမယ် ဆိုတာတောင်မှ မသိကြပါဘူး။” လို့ UNFPAရဲ့ တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သူ ၀ီလီယမ်မ် ရိုင်ယန်က ဒီကနေ့ ဘန်ကောက်မြို့၊ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဒဏ် သင့်ခဲ့ရလို့ ဘေးဒုက္ခရောက်နေသူပေါင်းဟာ ၂ ဒဿမ ၄ သန်းကျော်ရှိမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းထားပြီး လက်ရှိမှာ အကူအညီတွေ ပေးလိုက်နိုင်ပြီးသား ဒုက္ခသည် အရေအတွက်ဟာ ခန့်မှန်းခြေ ၁ ဒဿမ ၃ သန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘယ်နေရာက ဒုက္ခသည် တွေကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးတွေ ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့ စာရင်းဇယား အချက်အလက် တိတိကျကျ ခုချိန်ထိ မကောက်ယူနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီကြားထဲမှာမှ အကူအညီတွေ ပြတ်လပ်သွားမယ့်အရေးကို လည်း စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူသားဘေးဒုက္ခ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးရုံး OCHA ရဲ့ ဘန်ကောက်ရုံးခွဲက ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ မစ္စ အမန်ဒါ ပစ်တ်က -
“အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အမိုးအကာတွေ၊ စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေ လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေအတွင်း ပြတ်လပ်သွား မယ့်အရေးကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တာပေါ်လင်အမိုးအကာ တွေ သန်းဝက်လောက်ကို လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စားနပ်ရိက္ခာတွေ အဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ရန်ပုံငွေ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။” လို့ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးလုပ်သား ၉၀၀ ကျော်ကို နိုင်ငံထဲ ၀င်ခွင့်ပြုပြီးပြီလို့ မြန်မာ အစိုးရ ကဆိုပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂကတော့ ဒီအရေအတွက်ကို သီးခြားအတည်ပြုချက် မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း ၁၈၀ ကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ပဲ အမန်ဒါ ပစ်တ်က ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ကို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ဆယ်စင်းလုံး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲကခြောက်စင်းကို အကူအညီတွေပေးပို့ရာမှာ အသုံးပြုနေပြီလို့ WFP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပေါလ် ရစ္စလေ (Paul Risley) က ပြောပါတယ်။
မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ တာဝန်ရှိ သူတွေက ပြောဆိုကြပေမယ့် တဘက်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အားမလိုအားမရဖြစ် ဝေဖန်တာ တွေကလည်း ထွက်ပေါ်နေ ကြောင်းပါခင်ဗျား။
စကော့တလန်က ပေးအပ်သည့်ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရရှိ
အေးလဲ့ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၀၈
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဒန်ဒီမြို့က ၎င်းမြို့၏ အမြင့်မားဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုအတွက် ရွေးချယ်ကြောင်း မြို့တော်ကောင်စီဝင်အဖွဲ့က ယမန်နေ့ညတွင် ကြေညာလိုက်သည်။
အဆိုပါဆုကို စက်တင်ဘာလတွင် ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Burma Campaign (UK) မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး အန်နာရောဘတ်စ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်စား လက်ခံရယူမည်ဟု သိရသည်။
အန်အယ်ဒီပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “အဖွဲ့ချူပ် ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခုလို ဆုချီးမြှင့်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ နအဖက ကျနော်တို့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ အဖမ်းအဆီးတွေကို တိုးချဲ့တာဟာ ဝမ်းနည်းစရာပဲလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ကြေညာချက်တွင် နိုဘဲယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေမှုကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း၊ စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထားခြင်းမှ ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန်တို့ ဖော်ပြပါရှိသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အပြီးမှစတင်၍ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံနေရသည်မှာ ၅ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့အထိ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဘဝဖြင့် နေရချိန်စုစုပေါင်းမှာ ၁၂ နှစ် ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည့် အဖွဲ့ချူပ်ကြေညာချက်အရ မေလ ၂၇ ရက်နေ့က နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထပ်တိုးခြင်းခံခဲ့ ရသည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကို နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) အရ အာဏာပိုင်တို့ကအကျယ်ချုပ်ချထားခြင်းသည်တည်ဆဲဥပဒေအရမှားယွင်းနေကြောင်းခိုင်လုံသည့်ဥပဒေဆိုင်ရာကိုးကားချက်များကိုဖော်ပြပြီး အန်န်အယ်လ်ဒီ အနေနှင့် အယူခံဝင်ရန်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ သို့သော်လည်း ယနေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း ထပ်တိုးခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၁၉၇၅ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အားနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး
လိုသူများ၏ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည်ဟု ဆောင်းပါးရှင် ကျော်ရဲမင်းက ရေးသားထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော်က အရပ်သားများကို ချီးမြှင့်သည့် ဆုများထဲမှအမြင့်ဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နော်ဝေနိုင်ငံကချီးမြှင့်သည့် တွင်နိုဘဲယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာဆုပေါင်း များစွာကို ရရှိထားသူ ဖြစ်သည်။ [Top]
အခြေခံဥပဒေ ပျက်ပြယ်သွားပြီဟု အန်အယ်ဒီ ပြောကြား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ 11 2008 14:46 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ စစ်အစိုးရက အတည်ပြုထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် အာဏာပိုင်များ၏ ဥပဒေနှင့် မညီသော လုပ်ရပ်များကြောင့် “ဥပဒေကြောင်းအရ ပျက်ပြယ်သွားပြီ” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က သဘောထား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယခုနောက်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာသော အဖွဲ့ချုပ်၏ ကြေညာချက်သည် အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေသော ဖွဲ့စည်းပုံ၏ တရားမဝင်မှုကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သို့ ပထမဆုံး ချပြမှုဖြစ်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် ရှေ့လုပ်ငန်းများ၏ ပွဲဦးထွက် ဖြစ်သည်ဟု အဖွဲ့ချုပ်က မနေ့က ပြောဆိုသည်။
အဖွဲ့ချုပ်မှ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းညွန့်က “ကျနော်တို့ အထူး ကြေညာချက် ထုတ်တာက ပထမ လုပ်ငန်းစဉ် အနေနဲ့ စလိုက်တာပါ။ ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေကို တင်ပြသလို၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင်၊ နိုင်ငံတကာ အင်အားစု အသီးသီးကို ဒီကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရင်းနဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်း ဥပဒေအရပင် အခြေခံ ဥပဒေဟာ တရားမဝင်ဘူး၊ အဖွဲ့ချုပ်က လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ခြေလှမ်းလှမ်းတာပါ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပုံကို ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံမှုဖြင့် တရားဝင် အတည်ပြုအပြီး ၂ ပတ်နီးပါး အကြာတွင် ထုတ်ပြန်သော ပြည်တွင်း အဓိက အတိုက်အခံပါတီ၏ အထူးကြေညာချက်တွင် မေလ ၁ဝ ရက်နေ့နှင့် ၂၄ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးသွားသော ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ ရလဒ်သည် တရားမဝင်ဟု ဆိုသည်။
အဖွဲ့ချုပ် ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကျေး၊ စည်းရုံးရေး အဖွဲ့မှ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာနှင့် အထောက်အထားများအရ “ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ ဥပဒေ ကျောရိုးဖြစ်သော လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခြင်းတို့ ရှိခဲ့သည်” ဟု အဖွဲ့ချုပ်က စွပ်စွဲထားသည်။
“အာဏာပိုင်တို့သည် မိမိတို့ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေတို့ကို ဆန့်ကျင် ချိုးဖောက်ပြီး ထောက်ခံမဲ ရရှိရေးအတွက်သာ ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြည်သူလူထုအပေါ် အကြပ်ကိုင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လိမ်လည် လှည့်ဖျားခြင်း၊ အလွဲ ပြောဆိုခြင်း၊ မလျှော်သြဇာသုံးခြင်း နည်းလမ်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ ဥပဒေကျောရိုးဖြစ်သော လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခြင်းတို့ ရှိခဲ့သည်” ဟု ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
အလားတူ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထားသည့် ကိစ္စကို ဥပဒေကြောင်းအရ အယူခံခွင့်ပေးရန် စစ်အစိုးရကို အဖွဲ့ချုပ်က တောင်းဆိုထားသည်ဟု သိရသည်။
အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆီးထားတာ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး။ မညီကြောင်းကို ကျနော်တို့ဘက်က ဥပဒေအရ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တင်ပြဖို့ အဆင့်သင့်ရှိတယ်။ နအဖ အနေနဲ့ ဥပဒေနဲ့ ညီတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ကို အယူခံဖွင့်ပေးပါ။ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တင်ပြတာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယခင်ကလည်း အယူခံဝင်ရန် ကြိုးပမ်းသော်လည်း စစ်အစိုးရဘက်က တုံ့ပြန်မှုမရှိသဖြင့် ယခုတကြိမ်တွင် ကြိုတင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အသက် ၆၃ နှစ် ပြည့်မည်ဖြစ်သော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၁၉ နှစ်အတွင်း ၁၃ နီးပါး အချုပ်အနှောင် ခံနေရပြီး ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၇ ရက်နေ့က နောက်ဆုံး နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း ပြည့်သွားသော်လည်း စစ်အစိုးရက ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤအတောအတွင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကျရောက်ပြီးကတည်းက မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးကိစ္စနှင့် နှုတ်ဆိတ်နေသော ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပ အီးယူနိုင်ငံများ၏ ဝေဖန်မှုများ ပြန်လည် ထွက်ပေါ်လာသည်။
အမေရိကန် အစိုးရက နအဖ စစ်အစိုးရ ကျင်းပခဲ့သော ဆန္ဒခံယူပွဲသည် ယုံကြည်လောက်သော အခြေအနေနှင့် ဝေးကွာနေသည် ဟူသော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာ နိဂုံးချုပ်ချက်ကို ထောက်ခံလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ထွက်ပေါ်လာသော မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းရေးမှူးသစ် Tomás Ojea Quintana ၏ ပထမဆုံး အစီရင်ခံစာတွင် ဆန္ဒခံယူပွဲသည် “ယုံကြည်လောက်သော၊ ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံနိုင်သော အခြေအနေ စိတ်မကောင်းစရာ ဝေဝါးနေသည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် (Sean McCormack) က “အမေရိကန် အစိုးရအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပေါင်းရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် စစ်မှန်သော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးကို စတင်ရန် စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းပါတယ်” ဟုပြောသည်။
အီးယူအဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ထားသော (Piero Fassino) က “မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
အမေရိကန်နှင့် အီးယူ နိုင်ငံများသည် မြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံကာ စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများကြောင့် မြန်မာပြည်ကို နှစ်အတန်ကြာ ကတည်းက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။
မဲမသမာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့ချုပ်က ထောက်ပြသောအချက်များ
၁။ အာဏာပိုင်တို့ အနေဖြင့် ဗဟိုမှ အောက်ခြေအာဏာပိုင် အဖွဲ့ အသီးသီးနှင့် ၎င်းတို့အား ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားသော အဖွဲ့အစည်း များအား စိတ်တိုင်းကျ ဗြောင် မဲဆွယ်ခွင့် ပေးထားပြီး အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များကို စာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ဥပဒေအမှတ် ၅၊၉၆ နှင့် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေများဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း စသည့် ကန့်သတ် တားမြစ်မှုများ ရှိခဲ့သည်။
၂။ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲများကို မဲရုံနယ်မြေအလိုက် ခွဲတမ်းဖြင့် ပေးထားပြီး ခွဲတမ်းအတိုင်း ထောက်ခံမဲများ ရရှိအောင် စီမံထားခြင်း။
၃။ ခရီးဝေး သွားရန်ရှိခြင်း၊ နာမကျန်း ဖြစ်ခြင်း၊ မသန်မစွမ်း ဖြစ်ခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို ဖြစ်ခြင်း မဟုတ်ပါဘဲနှင့် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ချိုးဖောက်၍ ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ အရပ်သူ အရပ်သူများနှင့် လေဘေး ဒုက္ခသည်များထံမှ ထောက်ခံများကို အတင်းအကျပ် ကြိုတင် ရယူထားခြင်း။
၄။ ကန့်ကွက်မဲ ထည့်သူများကို ထောင် ၃ နှစ်ချမည်။ ဒဏ်ငွေ တသိန်း ဆောင်ရမည်။ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရမည်။ လယ်ယာမြေ သိမ်းခံရမည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မည်။ အလုပ်ပြုတ်မည်။ ကျောင်းထုတ်မည်။ ကန့်ကွက်မဲ ပေးခြင်းကို တနည်းနည်းဖြင့် သိအောင်လုပ်ခြင်း စသည့်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း။
၅။ မဲရုံရှေ့တွင် ယူနီဖောင်း ဝတ်ထားသော ရဲများ၊ အာဏာပိုင်များ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားသော အဖွဲ့များမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိနေခြင်း။
၆။ ရဲများက ထောက်ခံမဲ ပေးသူများသာ မဲရုံတွင်နေရန်၊ ကန့်ကွက်မဲ ပေးသူများ မဲရုံမှ ပြန်ရန် အတင်းအဓမ္မ နှင်ထုတ်ခြင်း။
၇။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များက အမှန်ခြစ်ထားသော ထောက်ခံမဲများကိုသာ မဲဆန္ဒရှင်များက မဲပုံထဲသို့ ထည့်ပေးရခြင်း။
၈။ အိမ်ထောင်စု တခုတွင် တဦးတည်းသာ ကိုယ်စားပြုပြီး ထောက်ခံမဲ ခြစ်ပေး၍ ထည့်စေခြင်း။
၉။ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူကို လူဦးရေအလိုက် အုပ်စုဖွဲ့ပေးပြီး ထိုအုပ်စုတွင် အာဏာပိုင်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်က ခေါင်းဆောင်လုပ်၍ ကိုယ်စားပြုပြီး ထောက်ခံမဲများ ထည့်စေခြင်း။
၁ဝ။ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများ စာရင်းကို ယူ၍ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များက ကိုယ်စားပြုပြီး ထောက်ခံမဲများ ခြစ်ပြီးထည့်ခြင်း။
၁၁။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်တိုင် ထောက်ခံမဲကို အပို ထပ်ထည့်ခြင်း။
၁၂။ မဲရုံကို ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်၍ သတ်မှတ်ချိန် ၄ နာရီမတိုင်ခင် စောစီးစွာ ပိတ်ခြင်း။
၁၃။ ထောက်ခံမဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ၊ ပယ်မဲများကို ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်တွင် စောင့်ကြည့် လေ့လာခွင့် မရခြင်း။
၁၄။ ကန့်ကွက်မဲများကို မီးရှို့ပစ်ခြင်းနှင့် ဖျောက်ဖျက်ခြင်း။
သားဖြစ်သူ မူးယစ် ရောင်းဝယ်၍ ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦး နှုတ်ထွက်ရတော့မည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ 11 2008 18:31 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ သားဖြစ်သူ တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုများတွင် ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် ကစထ (၁) မှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ကို နှုတ်ထွက်ခိုင်းထားသည်ဟု သတင်းများ ကြားသိရပါသည်။
စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် နှုတ်ထွက် စေလိုသည်ဟု ဆိုသည်။
“(ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး) ရဲမြင့် ဒီနေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ဒါမှမဟုတ် မကြာခင် သွားတော့မှာပါ” ဟု စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရပ်ကွက် တခုက မဇ္ဈိမကို ပြောကြားသွားပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရာ၌ တချိန်က ရဲမြင့်သည် သန်းရွှေ၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ မက်တာ အင်ဖက်တမင်း ဆေးပြားများ အဓိက ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သည့် ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) အပါအဝင် ငြိမ်းအဖွဲ့များကို မိမိအလိုအလျောက် လက်နက်စွန့်ရန် ဆက်သွယ် ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
(UWSA) သည် ပြည်တွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ဈေးကွက် အများစုကို ချုပ်ကိုင်ရန် ရည်ရွယ် ကြံစည်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထိုအမှုကို စုံစမ်းနေသော အဖွဲ့က သင်္ကာမကင်း ဖြစ်နေသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ မဇ္ဈိမ လျှို့ဝှက် သတင်းထောက်က သတင်း ပေးပို့ပါသည်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏သား အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို မေလ နောက်ဆုံးအပတ်က ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဤသတင်းကို မဇ္ဈိမက ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့က စတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤဖမ်းဆီး နှိမ်နင်းမှုတွင် ငယ်ရွယ်သော စီးပွါးရေးသမား တဦးလည်းဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် တဦးလည်းဖြစ်သူ မောင်ဝိတ် လည်း အခြား ရုပ်ရှင်လောကမှ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များနှင့်အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးနှင့် အထူး ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က ကြည်မြင်တိုင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အောင်ဇော်ရဲမြင့်ပိုင် ရဲတံခွန် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီရုံးခန်းကို ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ သေနတ်တလက်၊ လက်ထိပ်များနှင့် မြန်မာငွေကျပ် သန်းပေါင်းများစွာကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။
“တခန်းလုံး တထောင်တန် ငွေစက္ကူတွေနဲ့ ပြည့်နေတာဘဲဗျာ” ဟု စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူတဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောကြားသွားပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ဖေါ်ထုတ် ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစုကုမ္ပဏီ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ မောင်ဝိတ်ကိုပါ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ပြောဆိုပါသည်။
မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစု ကုမ္ပဏီသည် ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဒေသတခု ဖြစ်သည့် ကျိုက်လတ်မြို့နယ်တွင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည်။
သို့သော် အခြား သတင်းရပ်ကွက် တခုကမူ မောင်ဝိတ်ထံမှ ဘာမှ မတွေ့ရဘဲ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။ ရုပ်ရှင် မင်းသမီး အများစု ပါဝင်သည့် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အများအပြားလည်း ဤအမှုတွင် ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ကြရပြီး ယခုအခါ ခံဝန်ဖြင့် လွှတ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
ရဲအဖွဲ့၏ အလိုရှိသည် စာရင်းတွင် အောင်ဇော်ရဲမြင့်၏ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေဖြစ်သည့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး နဝရတ် ရှေ့ဆုံးမှ ပါဝင်နေသည်။ သူတို့ ၂ ဦးသည် မူးယစ်ဆေးဝါး အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဤနာမည်ကြီးများနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းက မဇ္ဈိမ ကို ပြောပါသည်။
အမေရိကန် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အေဂျင်စီ (DEA) ၏ အစီရင်ခံစာများအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် မက်တာအင် ဖင်တမင်း ထုတ်လုပ်မှုတွင် အာရှ၌ အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ သာမက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့လည်း တင်ပို့ ရောင်းချနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ရာဘ နှင့် အခြား စိတ်ကြွဆေးများ ကဲ့သို့သော တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သုံးစွဲနေကြသူများတွင် မြန်မာ သရုပ်ဆောင် နာမည်ကြီး အတော်များများသည် အောင်ဇော်ရဲမြင့်၏ ဖေါက်သည်များ ဖြစ်နေကြသည်မှာ ပြည်တွင်းတွင် အများသိသော လျှို့ဝှက်ချက်တရပ် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင် ‘ခေါင်းခါဆေး’ ဟု လူသိများသော ခရစ် စတယ်မက်တာ အင်ဖင်တမင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့၌ တပြားလျှင် ကျပ်ငွေ ၅ သောင်း ပေါက်ဈေး ရှိသည်။
အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၂ ဦး ဖြစ်သော သန်းရွှေနှင့် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့က အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို လမ်းလုပ်ငန်းတခုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျက်တော် ရှခဲ့ဖူးသည်။
မေမြို့-မန္တလေး လမ်းဖောက်လုပ်ရန် ရဲတံခွန် ကုမ္ပဏီကို အစိုးရက ကန်ထရိုက် ပေးခဲ့ရာ ကောင်းမွန်အောင် ဖောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် အေးရှားဝေါလ်ဒ် (Asia World) ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ၍ ပြန်လည် ဖောက်လုပ်ခဲ့ရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လက်နက် လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်မှု နာမည်ကြီး စီးပွားရေးသမားနှင့် ပတ်သက်
ဧရာဝတီ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နာမည်ကြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတွင် တဦးအပါအဝင်ဖြစ်သော မောင်ဝိတ်နှင့် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏ သားဖြစ်သူ အောင်ဇော်ရဲမြင့်တို့ ၂ ဦးသည် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုဖြင့် မေလ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း၌ ရဲ အဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီး အရေးယူမှု ခံခဲ့ရကြောင်း မောင်ဝိတ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တဦးက ပြောသည်။
အမှတ်(၁) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏ သား အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို စစ်တပ်နှင့် ရဲအဖွဲ့က မေလ၂၉ ရက်တွင် တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရဲတံခွန် တာဝါရှိ ၎င်း၏ ရုံးခန်းတွင် ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးစဉ် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ သေနတ် ၆ လက်ကို သိမ်း ဆည်းရမိကြောင်းနှင့် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် နဝရတ်ကိုပါ အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့်အတူ တွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါအောင်ဇော်ရဲမြင့်သည် အနုပညာအသိုင်းအဝန်းနှင့် လူကုန်ထံ အသိုင်းအဝန်းအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူတဦးဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီက ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ မေးမြန်းစုံစမ်းရာတွင် ယင်း အမှုသည် ခရိုင်မူးယစ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့က ဝင်ရောက်စီးနင်း ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ အနေနှင့် အသေးစိတ် မသိရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
မောင်ဝိတ်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း တဦးကမူ“အောင်ဇော်ရဲမြင့်နဲ့ မောင်ဝိတ်တို့ ၂ ယောက် ပေါင်းပြီး ဆေးလည်းသုံးတယ်၊ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကို ရောင်းချတာလည်း ရှိတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
“သူတို့က အဲဒီ ရုပ်ရှင်အနုပညာလောက က ဆေးသုံးချင်တဲ့ သူတွေကို ဖိတ်ပြီး ပါတီပွဲ လုပ်ပေးတယ်၊ အဲဒီမှာ ဆေးလည်း သုံးလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်”ဟု ကိုယ်တိုင်ပါတီတက်ရောက်ခဲ့သည့် အမည်မဖော်လိုသူ တဦးကလည်း ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး“သူတို့က လူတွေကို ဆေးစွဲအောင် အရင်လုပ်ပြီးတော့ ဆေးစွဲပြီဆိုမှ ဆေးရောင်းတော့ တာ”ဟုလည်း ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ အောင်ဇော်ရဲမြင့်သည် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ရဲတံခွန် တာဝါတွင် ရဲတခွန် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဖွင့်လှစ် ထားပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လက်ခွဲများဖြင့် ကြီးကြီးမားမား လုပ်ကိုင် နေခြင်းဖြစ်သည် ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ စီးပွားရေးသမား တဦးကပြောဆိုသည်။
စစ်အာဏာပိုင်များက ယင်းအောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တွင် မောင်ဝိတ်နှင့် တခြားသော မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသည့် အနုပညာလောကသား တချို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မောင်ဝိတ်သည် Maung Weik & Family Co., ကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူချမ်းသာ စာရင်းဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မောင်ဝိတ်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာတွင် ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတဦးက ပြန်လည်ဖြေကြားရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
မောင်ဝိတ်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေသူများထဲတွင် တဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အစိုးရက ပြန်လည် မွမ်းမံနေသည့် ရန်ကုန်မြို့ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ မကြာသေးခင်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကျော် ပါဝင် လှူဒါးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မောင်ဝိတ်သည် နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏သမီး ခင်ပြုံးရွှေကို လက်ထပ် ပေါင်းသင်းရန် ကြိုးပမ်း နေသည့်အတွက် ၎င်း၏ ဇနီး မယာဉ်မင်းခင်အား မကြာသေးခင်က ကွာရှင်းထားကြောင်းလည်း ရန်ကုန် စီးပွားရေး အသိုင်းအဝန်းအတွင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
မောင်ဝိတ်အား ဖမ်းဆီးချိန်တွင် ၎င်း၏မိခင်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ဇွန်လ ၇ ရက်က ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် နဝရတ်နှင့်ဖိုးကျော် အပါအဝင် မောင်ဝိတ်ကို အာဏာပိုင်များက ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်ပြီး အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို မူ ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်ဟု လူအများက ယူဆ နေကြသည်။
ယခု မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် ဆက်စပ်နေသူများကို ဆက်လက်စုံစမ်း နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး လူစားထိုး၍ အောင်ဇော်ရဲမြင့်အား ပြန်လည်လွှတ်ပေးနိုင်သည်ဟုလည်း လေ့လာ သူများက ပြောဆိုသည်။
ယင်းအမှုအခင်းအား ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း မပြုရန် သက်ဆိုင်ရာက တင်းကျပ် ထားကြောင်း သိရသည်။
ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ တဦးကမူ“အစိုးရနဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွှယ်တာတွေကို မြန်မာစာနယ်ဇင်းမှာ ဖော်ပြဖို့ လွတ်လပ်ခွင့် မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူတွေ သိရှိအောင်လို့ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖော်ပြတဲ့ဂျာနယ်တွေ တော့ ရှိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ [Top]
အဲပုဂံ၏ ရန်ကုန်-ဘန်ကောက် ခရီးစဉ် သုံးလ ရပ်နားမည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ 11 2008 17:42 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ အဲယားပုဂံ၏ ရန်ကုန်-ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်ကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှစ၍ သုံးလကြာ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း လေကြောင်းလိုင်း သတင်းရပ်ကွက် အပြောအရ သိရသည်။
လေကြောင်းကုမ္ပဏီက တရားဝင် အကြောင်းပြချက် မပေးဘဲ စက်တင်ဘာလအတွင်း အထိ လေကြောင်းလိုင်းကို ရပ်နားမည်ဟု လက်မှတ် အရောင်းဌာနများသို့ ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာတွင် ပါရှိသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်ကနေ ပြောထားတယ်။ ဒီလ ၁၃ ရက် နောက်ပိုင်းကနေ စက်တင်ဘာလလောက်အထိ ခဏပိတ်မယ် ပြောတယ်။ ပိုတဲ့ လက်မှတ်တွေကိုတောင် ပြန်အပ်လိုက်ပြီ” ဟု Nice Fare ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ လက်မှတ် အရောင်းဌာနမှ မန်နေဂျာ တဦးဖြစ်သူ ကိုသူရ က ပြောသည်။
ရန်ကုန်-ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်အား အဲယားဘတ်စ် အေ ၃၁ဝ-၂ဝဝ လေယာဉ်များဖြင့် အပတ်စဉ် တနင်္လာနှင့် သောကြာ၂-ကြိမ် ပြေးဆွဲခဲ့ရာမှ ယခုအခါ လုံးဝ ရပ်နားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ပြည်ပမှ လာရောက်သော ခရီးသည်များ သိသိသာသာ လျော့ပါးသွားမှုနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံက အဲပုဂံ ကုမ္ပဏီအပေါ် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် လေကြောင်းလိုင်းပိုင် လေယာဉ်များအတွက် အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု အကန့်အသတ်များကြောင့် ရပ်နားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အဲပုဂံလီမိတက် သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
အဲပုဂံ လီမီတက်၏ သူဌေးမှာ ဦးတေဇဖြစ်ပြီး နအဖစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ မိသားစု အပါအဝင် ထိပ်တန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ နှင့် အထူးတလည် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် မှစ၍ မြန်မာစစ်ဘက် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၂၅ ယောက်နှင့် စစ်အစိုးရနှင့် အနီးကပ်ဆုံး ပူးပေါင်း ရှာစားနေသူ စီးပွားရေသမား ၁၂ ဦးတို့၏ ဘဏ်စာရင်းများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းများ စတင်ခဲ့ရာ ဦးတေဇလည်း ပါဝင် သွားသည်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အရေးယူ ကန့်သတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာ အဲပုဂံ၏ ရန်ကုန်-စင်္ကာပူ-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ကို ရပ်နားခဲ့သည်။
ယခုလို ရန်ကုန်-ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့်အတွက် လက်မှတ်ဖိုးများ အပြည့် ပြန်အမ်းပေးမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ကြိုတင် လက်မှတ်ယူထားသည့် ဘန်ကောက်မှ ရန်ကုန် လာမည့် ခရီးသည်များအားလည်း နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်း အမ်အေအိုင် သို့ လွှဲပေးထားသည်။
အလားတူပင် အခြားသော ပုဂ္ပလိက လေကြောင်းလိုင်း တခုဖြစ်သော အဲမန္တလေး၏ ရန်ကုန်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့သို့ ပျံသန်းသော ခရီးစဉ်အား ဇွန်လ ၇ ရက်မှစတင်ကာ သြဂုတ်လ အထိ ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားသည်။
“အသေးစိတ် ဘာမှ အကြောင်းကြားထားတာ မရှိဘူး။ လေယာဉ် ခရီးစဉ်ကို သြဂုတ်လ ၇ ရက်အထိ Suspend (ရပ်နား) လုပ်မယ်လို့ အကြောင်းကြားထားတယ်။” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် အဲမန္တလေးမှ အမည်မဖော်လိုသူ ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“ခရီးသည် နည်းသွားလို့ ထင်ပါတယ်။ ခရီးသည်တွေက ခုမှ နဲနဲကျသွားတယ်။ အရင်ကတော့ အဲလို မဟုတ်ဘူး” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များပိုင် လေယာဉ် ခရီးစဉ်များ သာမက ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများပိုင် လေကြောင်းလိုင်းများလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြေးဆွဲနေသော ခရီးစဉ်များကိုလည်း အခေါက်ရေ လျော့ချ ပြေးဆွဲနေသည်။
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် အဲပုဂံလေယာဉ်များ ပြုပြင်မွမ်းမံ ပြင်ဆင်နေစဉ်။
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။ ။ မဇ္ဈိမ။
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ ပြတ်လပ်နိုင်ဖွယ်ရှိ11 June 2008
အစားအစာရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသော မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များ။ဇွန် ၉၊ ၂၀၀၈။
မြန်မာနိုင်ငံက နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဒဏ်သင့်ခံရသူတွေအတွက် ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းတွေပေးပို့ဖို့ ယာဉ်တွေရပြီး ပစ္စည်း တွေပေးပို့နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာပဲ ပေးပို့စရာပစ္စည်းတွေ ထပ်ပြီးလိုလာတော့မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း
ရေးမှူးချုပ်ရုံးက ဒီနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြ ပေးထားပါတယ်။လေဘေးဒဏ်ခံရသူတွေ တကယ်တမ်းလိုအပ်နေတဲ့ အမိုးအကာတွေ၊ စားနပ်ရိက္ခာ တွေနဲ့တခြားကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေဟာလာမယ့်သီတင်းပတ်တွေ
အတွင်းမှာပဲထပ်ပြီး ဒီ့ထက်ပိုလိုလာတော့မယ်လို့ အိုချာလို့ခေါ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံးရဲ့
ပြောကြားချက်တွေကို အင်္ဂါနေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး
လက်ထောက်ပြောခွင့်ရ မစ္စ မာရီ အိုကာဘဲ(Marie Okabe) က …
“ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ အဆက်မပြတ် လုပ်လာနိုင်ပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂက ပေးအပ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ရန်ပုံငွေဟာ ၂၁% သာရှိတာမို့ တကယ်လို့ ဇူလိုင်လလယ်လောက်မှ နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေ ထပ်မရရင် စားနပ်ရိက္ခာ အလျင်မပြတ် ဆက်ပြီး
ပေးနိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာတော့မယ်” လို့ ကုလသမဂ္ဂ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး(UNOCHA) ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကို
မစ္စ အိုကာဘဲက တင်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာက အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ အရေးပေါ်အကူအညီ တောင်းခံဖို့အတွက် တိုးပြီး
လှူကြဖို့လည်း မစ္စ အိုကာဘဲက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အကူအညီတွေ အလျင်မပြတ်ပေးဝေနိုင်ဖို့အတွက် အထူးလိုအပ်နေတဲ့
စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွေ မပြတ်လပ်ဖို့အတွက် ငွေကြေးတွေ လိုအပ်နေသလိုပဲ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့
ဇလဘူမိဗေဒ ပညာရှင်တွေ၊ ရေဆိုးနုတ်ပယ်ရေးဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတွေ အမြောက်အမြားလည်း ဒီဒေသအတွက် ရေရှည်မှာ
စနစ်တကျနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်လို့လည်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းအထန်ခံရတဲ့ ဒေသတွေအတွက် ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့(WFP) က လေယာဉ်တွေ အကူအညီပေးနိုင်တ
ဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း …
“မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းအထန်ခံရတဲ့နေရာတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ပေးနိုင်ဖို့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) မှာ အခု ရဟတ်ယာဉ် ၆ စီး ရထားပါပြီ။ နောက်ထပ်ရဟတ်ယာဉ် ၄ စီးဟာလည်း အခု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေပါပြီ။ ဒီသီတင်းပတ်အကုန်လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာမို့အခုဆိုရင် WFP က ရဟတ်ယာဉ် ၁၀ စီးနဲ့ အကူအညီတွေ ပေးနိုင်တော့မှာပါ” လို့မစ္စ အိုကာဘဲက ပြောကြားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အထိ WFP အဖွဲ့ကနေ စားနပ်ရိက္ခာတန်ချိန် ၁၀,၀၀၀ ကျော် ပေးပို့နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အစားအသောက်နဲ့ ကူညီရေးပစ္စည်းတွေဟာ ဒုက္ခသည် ၅၀၀,၀၀၀ လောက်အတွက် ပေးပို့နိုင်ခဲ့တာပါလို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မုန်တိုင်းသင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသခံ ကူညီရေးအဖွဲ့ ၈၆ ဖွဲ့က ကူညီသူတွေ သွားရောက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာ ကူညီရေးဝန်ထမ်းပေါင်း
၁၈၀ အတွက် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကူညီသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေထိုင်ခွင့် ၂ ရက်နေ ၃ ရက်အထိသာ ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက သန်းနဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ အခု တလကျော်ကြာလာတဲ့အထိ
အကူအညီတွေ မရသေးတဲ့သူ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေပြီး သွားရောက်ကူညီတဲ့ ပြည်ပကလူတွေ လက်လှမ်းမမီကြတဲ့အပြင် ပြည်တွင်းကလူတွေလည်း အဖမ်းခံရတဲ့လူတွေ၊ အတားအဆီး အနှောင့်အယှက်မျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်ကို ကုလသမဂ္ဂက ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ သိပါသလဲလို့ မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာတော့ …
“မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းက လူတွေအနေနဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားနေရတာမို့ ဒုက္ခသည် ဘယ်အတိုင်းအတာကရပြီးဘယ်လိုပုံ အဆင်ပြေမှုတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့ပုံတော့ မပေါ်သေးပါဘူး။ အခုအထိ အကူ
အညီတွေ ပေးနေရဆဲ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး အခြေအနေမှာပဲ ရှိသေးတယ်” လို့ မစ္စအိုကာဘဲက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေခြာတာတခုကတော့ ကယ်ဆယ်ကူညီရေးတွေ အခုထက်ထိ လုံလုံလောက်လောက် မပေးနိုင်သေးပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကတော့ ကယ်ဆယ်ကူညီရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ လိုအပ်
မယ်လို့ တွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး အကြီးအကဲဂျွန်ဟုမ်းစ် (John Holmes) ကတော့ မေလကုန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာ့ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကူအညီအလှူငွေ ဒေါ်လာ ၁၃၃ သန်းနဲ့ နောက်ထပ်
လှူမယ့်ငွေ သန်း ၁၀၀ ရှိပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် တကယ်တမ်းရရှိတဲ့ အကူအညီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဟုမ်းစ် နောက်တခါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မှပဲ သိရမှာပါလို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးရဲ့ ပြောခွင့်ရက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နာဂစ်အလှူအတွက် အထက်မြန်မာပြည် စာပေအင်အားစုက သိန်း ၅ဝ ကျော် ကောက်ခံရရှိ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ 11 2008 15:56 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ လေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် အထက်မြန်မာပြည် စာရေးဆရာများ ကြီးမှူးအလှူငွေ ကောက်ခံမှုမှာ ကျပ်ငွေ သိန်း ၅ဝ ကျော် ရရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
မန္တလေး အပါအဝင် အထက် မြန်မာပြည် တခုလုံးသို့ မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင် ကောက်ခံခဲ့သည်။ အလှူငွေမှာ ၅၂ သိန်းခန့် ရရှိသည့်အပြင် ဆန်၊ ခေါက်ဆွဲထုပ်၊ ဆီ၊ မုန့်ပုံး၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ၊ အဝတ်အစားများလည်း ပါဝင်သည်။
“နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများအတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီဖို့ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် တခုပါပဲ။ စာပေပညာရှင်တွေ ဦးဆောင်ပေမယ့် ပြည်သူတွေလည်း အများစု ပါဝင်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကောက်ခံတာကတော့ မန္တလေး ဝန်းကျင်အားလုံးကို ဘောက်ချာစာအုပ်တွေ၊ ပစ္စည်းအလှူခံ ဖြတ်ပိုင်းနဲ့ပါ။ ဖြန့်ပြီးတော့ ကောက်ခံခဲ့တာပါ။ အခုတော့ သွားလှူဖို့ အဆင့်သင့် ရှိပါပြီ” ဟု ကဗျာဆရာ စံငြိမ်းဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာက “ကျနော်လည်းပဲ နာဂစ်သင့် ပြည်သူတွေကို တစိတ်တပိုင်း မတည်ချင်လို့ပါ။ ကျနော်တို့ စာပေအဖွဲ့တွေလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီချင်တယ်လေ” ဟု ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများအား လှူဒါန်းရန်အတွက် အထက် မြန်မာပြည်ရှိ ကျောက်ဆည်၊ ရွှေဘို၊ စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ၊ မြစ်ကြီးနား၊ မိုးညှင်း၊ တောင်ကြီး၊ မေမြို့၊ ပျဉ်းမနား၊ ပုလိပ်၊ မိုးကုပ်၊ ကျောက်မဲ၊ လားရှိူး၊ မင်းဘူး စသည့် မြို့နယ်များတွင် ကောက်ခံခဲ့သည်။
အဖွဲ့နာယကအဖြစ် စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာတော် ဦးပညာ (အမရပူရ)၊ ဆရာဦးအေးမြင့် (မြန်မာ့ရိုးရာ ဒီဇိုင်းပညာရှင်)၊ ကဗျာဆရာ ဦးအံ့မောင်၊ ဆရာမောင်သစ်လွင် (လူထု) တို့အား ဦးထိပ်ထားကာ အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများနှင့် သတင်းထောက်များ စုပေါင်း၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ကဗျာဆရာ စံငြိမ်းဦးက “ကျနော်တို့ ကြေညာထားတာ တခုရှိတယ်လေ။ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများကို ကူညီကြပါစို့လို့ ပြောထားတယ်လေ။ ကျနော်တို့က ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအရ နည်းသည်၊ များသည် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ အထက်မြန်မာပြည် စာပေပညာရှင်များ အနေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တသားထဲ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြချင်တာလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်လည်း ခံစားရတဲ့အပေါ်မှာ တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အလားတူပင် နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ပါပါလေးတို့လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၄-၅-၆ ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးမြို့တွင်း နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အလှူငွေများ လိုက်လံ ကောက်ခံခဲ့သည်။
အေးချမ်းမြေ့ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၀၈
ကိုလေးနားမှာ ကလေးတွေဝိုင်းနေကြသည်။ အရွယ်အားဖြင့် ၄ နှစ်၊ ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်၊ ၁၁ နှစ်ခန့် ကလေး အယောက် ၂၀ ခန့်ရှိမည်။ သူ့ဆီမှာ ရန်ကုန်က ဝယ်လာသည့် ပလတ်စတစ် ဘောလုံးလေးတွေ တော်တော်များများ ပါလာသည်။ သို့သော် လည်း တယောက်တလုံး ဝေပေးရလောက်အောင်တော့ မလောက်ငလှ။
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် တောကျောင်းရွာမှ ကလေးများ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ကဲ ပင်နယ်တီကန်ကြမယ်။ ဝင်အောင်ကန်နိုင်တဲ့သူကို ဘောလုံး တလုံး ဆုချမယ်” ဟု ကိုလေးက ပြောလိုက်ရာ ကလေး များ ဝမ်းသာအားရ ထခုန်ကြသည်။ ပင်နယ်တီကန်ပြီး ပြောထားသည့်အတိုင်း ကိုလေးက ဆုချလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကစားနည်း နောက်တမျိုး ပြောင်းပြန်သည်။ ဒီတခါတော့ သူတို့ ပစ္စည်း ရှာဖွေတမ်းကစားဖြစ်သည်။
“ပုရွက်ဆိတ် အနီတကောင် ရှာပေးပါ။ အရင်ရှာနိုင်တဲ့သူ ဘောလုံးရမယ်” ဟု ကိုလေးက ပြောလိုက်ရာ ကလေးများ ပျော်ရွှင်စွာ ပြေးထွက်သွားတော့သည်။
ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်ထဲက တောကျောင်းဆိုသော ရွာကလေးမှာ ကိုလေးတို့အဖွဲ့ ရောက်ရှိနေကြခြင်း ဖြစ်၏။ ကိုလေးတို့ အဖွဲ့ထဲမှာ ဆရာဝန် ၃ ဦးနှင့် ကူညီပေးမည့်သူက သူအပါအဝင် ၅ ဦး စုစုပေါင်း ၈ ဦး ပါဝင်သည်။ ကိုလေးက ကားနှင့် လူစိုက်သည်။ ကိုလေး၏ မူရင်းအလုပ်က ဧည့်လမ်းညွှန်။ ခုတော့ သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်များက နာဂစ် မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံခဲ့ ရသည့် ဒေသများတွင် အခမဲ့လိုက်လံ ဆေးကုသပေးချင်သည် ဆိုသဖြင့် သူ့ကားကို သူကိုယ်တိုင်မောင်းကာ လိုက်ပို့ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ခုအချိန်က တကယ်ဆို စပိန်တွေ၊ အီတလီတွေ အလာများတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကျနော်နဲ့ ကြိုချိတ်ထားပြီးသား ဧည့်သည်တွေ ဘယ်သူမှ မလာဖြစ်တော့ဘူး။ အလုပ်လည်း အားနေတဲ့ အတူတူ သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီရင်း လုပ်အားအလှူ ပါဝင်တာပါ” ဟု ကိုလေးက ကျမကိုပြောပြသည်။
တောကျောင်း ရွာကလေးက မူလတန်းကျောင်းကလေးမှာ သူ့သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်များက လူနာများကို ကြည့်ရှုပေးနေစဉ် သူက ကလေးထိန်းပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
“ကလေးလေးတွေက မှိုင်နေကြတာဗျ။ တချို့ကြောင်တောင်တောင်လေးတွေ ဖြစ်နေတာ။ ကျနော်နဲ့ ကစားရင်း သူတို့ တော်တော် ပျော်သွားကြတယ်။ တဘက်တလမ်းက သူတို့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ဝိုင်းကုစားပေးတာပေါ့ဗျာ” ဟု ကိုလေးက ဆက်ပြောသည်။
ကိုလေးတို့အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သော လူငယ်ဆရာဝန်လေးတဦးက မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော ဒေသများမှ ကလေးများတချို့မှာ စိတ်ဓာတ်များ ကြမ်းတမ်းနေပြီး တချို့မှာ မှိုင်တွေနေ သည်ကို တွေ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေ ရှိသည့် ကလေးများကို မတွေ့ရ သလောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
“ကိုလေးက ခုလိုကလေးတွေနဲ့ နေပေးတာလည်း တော်တော်ထိရောက်တယ်ဗျ။ သူတို့လေးတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိုင်းကုပေးနေသလိုပဲ။ ပထမတခေါက် ကျနော်တို့ သွားတုန်းကဆို ကလေးတွေက တော်တော် ဆိုးသလိုဖြစ်နေတာ။ ဆေးကောင်းကောင်း ကုလို့ မရခဲ့ဘူး” ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
အဲဒီရွာမှာ လူနာတွေကြည့်၍ လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးများပေးခဲ့ပြီးတော့ နောက်တရွာသို့ ကူးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ ဖျာပုံဘက်က ရွာများကို သွားဖြစ်သည်တဲ့။
ဂွေးချောင်းဆိုသည့်ရွာမှာ အရင်က အိမ်ခြေ ၁၂၀ ရှိသည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၁၀၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ သူတို့အဖွဲ့က ရွာတရွာရောက်သည်နှင့် စပီကာနှင့်အော်သည်။ တနေရာ တွင်စုရပ်လုပ်ကာ ဆေးကုပေးရန်ဖြစ်သည်။ လာနိုင်သည့်သူ များက ရောက်လာကြသည်။ မလာနို်င်သူများကို ကိုလေးက လိုက်လံခေါ်ဆောင်ပေးသည်။
“ဂွေးချောင်းမှာ မုန်တိုင်းဖြစ်စက လူ ၉၀ ကျော် သေတယ်။ နောက်ပိုင်း ရောဂါနဲ့ ထပ်သေ ကြတာနဲ့ ၁၀၇ ယောက် ဖြစ်သွားတာ” ဟု ကိုလေးကပြောသည်။
အများစုမှာ နမိုးနီးယားခေါ် အဆုတ်ပွဝေဒနာ ခံစားနေရပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကြောင့် မေးခိုင်ပိုးဝင် သေဆုံးခြင်းများ၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင် ဖြစ်နေသူများ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုရွာသို့ ကိုလေးတို့ မရောက်ခင်ကပင် အမျိုးသမီးတဦး မေးခိုင်ပိုး ဝင်ကာ သေဆုံးသွားခဲ့ ကြောင်း ကိုလေးက ပြောပြသည်။
“တော်တော်များများမှာ ထိခိုက်ရှနာ ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်။ အိုးကွဲ ပုလင်းကွဲတွေက အများကြီးဆိုတော့ ကျနော်တို့တောင် တော်တော် ရှောင်ရှားသွားနေရတာ။ တချို့ ကလေးတွေဆို အနာကြီးတွေ ရင်းပြီး အဖျားဝင်နေကြတယ်” ဟု ဆရာဝန် လူငယ် လေးက ပြောသည်။ နမိုးနီးယား ဖြစ်သူတို့မှာလည်း ရေလှိုင်းတက်လာစဉ်က အဆုတ်ထဲ ရေဝင်ခဲ့သော ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးကို အများဆုံး ထိုးပေးခဲ့ရကြောင်း ထိုဆရာဝန်က ဆက်ပြောသည်။ သူ၏ အဆိုအရ အသက် ၆၀ ဝန်းကျင် လူကြီး အတော်များများမှာ သွေးတိုး နေကြသည်တဲ့။ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်များဖြင့်သာ စားနေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သူက ဆက်ပြောပြသည်။
“ကျနော်တို့ ဆရာဝန်တွေက ငါးပိ၊ ငါးခြောက် မစားပါနဲ့ ပြောတော့ ဝိုင်းရယ်ကြတယ်။ သူတို့မှာ ဒါပဲရှိတာကိုးဗျာ။ လူကြီး ဆိုတော့လည်း ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာ အငန်ဓာတ် ကလေးနဲ့မှ ထမင်းစားဝင်တာပေါ့” ဟု ဆရာဝန်လေးက ပြောပြသည်။
အဲဒီကနေ တဆင့် ကံစုရွာသို့ ရောက်သည်။ ကံစုရွာမှာလည်း ထုံးစံအတိုင်း ဆေးကုပေးပြီးတော့ သောကြာ ရွာသို့ ဆက်သည်။ အဲဒီရွာမှာက ဆေးမှူးတယောက် ရှိသည်ဆိုတော့ သူတို့ မဝင်တော့ဘဲ ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။
နောက်တပတ်ကျရင်တော့ ဒီထက်အင်အားတောင့်မည်ဟု ကိုလေးကပြောသည်။ ဆရာဝန်အင်အားကော ကူညီမည့် လူအင်အားပါ ထပ်ဖြည့်သွားကြမည်တဲ့။
အဲဒီဘက်က ရွာတွေက ချမ်းသာသူတွေများတော့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေ မပြိုဘဲ ကျန်နေတာရှိသည်။ အဲဒီအိမ်တွေကို နည်းနည်းပါးပါးပြင်ပြီး စုပေါင်းနေထိုင်ကြကြောင်း ကိုလေးကပြောသည်။
တတ်နိုင်သလောက် အစုအဖွဲ့ကလေးများ ဖွဲ့ကာ ကူညီနေကြသူများ များစွာရှိနေပါသည်။ သို့သော်လည်း မုန်တိုင်းဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကူညီနိုင်သည့် အင်အားများ ယုတ်လျော့လာခဲ့ပြီ။ ငွေအား၊ လူအား၊ အချိန် စသည်ဖြင့် အင်နှင့် အားနှင့် ပေးနိုင်ဖို့ဆိုသည်မှာ ပေးသည့်သူဘက်မှလည်း ထိုအင်အားများရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ကိုလေးကတော့ သူတို့၏ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းများ ပြန်မစမချင်း တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်မည်ဟု ကျမကိုပြောပြသည်။ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်မည် ဆိုသည်ကိုတော့ သူမပြောတတ်ပါဟုဆိုသည်။ ခုထိတော့ သူတို့ကို ကူညီမည့် ဆေးဝါးဝယ်ရန် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပေးသူ၊ ပညာအားဖြင့် ကူညီသူ၊ လုပ်အားဖြင့် ကူညီသူအနည်းငယ် ရှိနေပါသေးသည်။
လေစိမ်းဒဏ်ခံခဲ့ရသောကြောင့် အပြန်တွင် ကိုလေး အနည်းငယ် ဖျားလာသည်။ သို့သော်လည်း သူပျော်နေသည်။ သူက ဆရာဝန်မဟုတ်ပေမယ့် သူတတ်နိုင်သလောက်ကလေး ပါဝင်လိုက်ရတာကို ကျေနပ်သည်။
ကစားနည်းတခုအဖြစ် သူ့ကားနံပါတ်ကို ပေါင်းခိုင်းရာ ရလဒ်အမှန် ၂၁ ဟု သွက်သွက် လက်လက် ဖြေခဲ့သော ၁၀ နှစ် အရွယ် ကလေးမလေးကို သူက ဘောလုံးတလုံး ဆုချခဲ့သည်။ ဆုမရသူကလေးများက သူ့ကို “ကတုံးကြီး” ဟု အော်ဟစ် ထွက်ပြေးခဲ့ကြသော်လည်း သူစိတ်မဆိုးပါ။ နောက်တခေါက်အတွက် ကစားနည်း အသစ်များ စဉ်းစားရင်း ပို၍ပင် တက်ကြွ လန်းဆန်းနေသေးသည်။
ဗီယက်နမ်လို မြန်မာ ဘာကြောင့် မတိုးတက်သလဲ
ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘိုဗန်ကီယက်က ဗီယက်နမ်ကို စီးပွားရေး ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နေချိန် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လွတ်လပ်တဲ့ စီးပွားရေး ဈေးကွက်စနစ်ကို စတင်ခဲ့တာပါ။ ဗီယက်နမ်မှာကျတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးတက်လာပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဘာကြောင့် မတိုးတက်သလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးကျော်ဇံသာက သုံးသပ်ပြထားပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးကတော့ စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ် လူမျိုးတွေဟာ သိပ်ကို ရန်ညိုးဖွဲ့ပြီးတော့ စွဲမြဲထားတတ်တဲ့ သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် နယ်ချဲ့ ဗြိတိသျှအုပ်စိုးခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်လောက်ကတည်းက ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ အခုထိ နယ်ချဲ့ ဗြိတိသျှကို ဗမာ အာဏာပိုင်တွေ အထူးသဖြင့် ရန်ညိုးဖွဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်လောက်တွင်းက သူတို့ကို ဗုံးကြဲပြီးတော့ တတိုင်းပြည်လုံး ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေစေခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ကို သူတို့ ရန်သူလို သဘောမထားပါဘူး။ အခု အမေရိကန်နဲ့ပဲ ပြန်လက်တွဲပြီးတော့ စီးပွားရေး လုပ်နေပါတယ်။ အလားတူစွာပဲ တရုတ်နိုင်ငံဆိုရင် ဗီယက်နမ်ကို နှစ်ပေါင်းတထောင်နီးပါး လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၀ကျော်ကျော် လောက်မှာလည်း ကျူးကျော်ပြီးတော့ စစ်တိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗီယက်နမ်တွေဟာ တရုတ်ကို ရန်သူလို သဘောမထားဘူး။ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အဖြစ် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံပါတယ်။ ဥပမာ ဗမာဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံကို တကယ်တော့ သူတို့ကပဲ နိုင်နေ ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းကို အခုထိရန်သူလို သဘောထားတယ်။ ထိုင်း ယဉ်ကျေးမှုအရ လက်အုပ်ချီ ပြီးတော့ အပြန်အလှန် ရှိခိုးတာတောင် ထိုင်းဘက်ကသာ ရှိခိုးတယ် ဗမာဘက်က အာဏာပိုင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေမှာ တခါမှ ပြန်ရှိခိုးတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီလို စိတ်ဓာတ်မျိုး ဗီယက်နမ်မှာ မရှိပါဘူး။
ဒုတိယ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တခုကတော့ ဗီယက်နမ် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အရပ်သားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တွေဟာ စစ်သားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဗမာ စစ်ဗိုလ်တွေ ကြည့်သလို အရာရာကို စစ်ရေး ရှုထောင့်က မကြည့်ပါဘူး။ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ပဲလာလာ၊ ဘယ် လေယာဉ်လာလာ၊ စစ်သင်္ဘောလာလာ သူတို့မှာ ကူညီမယ် ဆက်ဆံရေး လုပ်မယ်ဆိုရင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လက်ခံပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဗီယက်နမ် အကောင်အထည်ဖော်တာ သိပ်အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ အတိုက်အခံ ပါတီမရှိပေမယ့် တောင်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းအကြား လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ တောင်ပိုင်းဟာ အမေရိကန်နဲ့ နီးစပ်တယ်။ မြောက်ပိုင်းက ကွန်မြူနစ်တွေ ဖြစ်တယ်။ နှစ်တော်တော်များများ တောင်ပိုင်းသားတွေကို နေရာမပေးဘူး။ အခုအခါမှာ ပေါ်လစ်ဗျူရို နေရာမျိုးမှာ တောင်ပိုင်းသားတွေကို နေရာပေးတဲ့အတွက် တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြဿနာဟာ ပြေလည်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတခုကတော့ လူဦးရေနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ လူဦးရေရဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကျော်ဟာ အသက်သုံးဆယ်အောက် လူငယ်တွေချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အစိုးရက စစ်မှန်တဲ့ မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေနဲ့ လမ်းဖွင့်ပေးတော့ လူငယ်တွေဟာ အားသစ် မာန်သစ်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ကြိုးစားတာကို ကြည့်ရပါတယ်။
ဒါတွေဟာ အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မဖွင့်ဖြိုး၊ ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်ဖွင့်ဖြိုးချင်း၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲချင်းမရှိဘဲနဲ့ ဗီယက်နမ်ကျတော့ တကယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အတွက် တိုးတက်သွားတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/11/20080အကြံပြုခြင်း
Foreign aid agencies concerned over new Myanmar guidelines complicating their work
Ten thousand pregnant women among Myanmar's estimated 2.4 million cyclone survivors are in urgent need of proper care,aU.N. official said Wednesday, as fresh questions were raised about the government's willingness to accept foreign assistance.International aid agencies are expressing concern over new and complicated guidelines established by Myanmar's government for carrying out assistance programs to victims of last month's cyclone.
The guidelines, distributed Tuesday by the government atameeting with U.N. agencies and private humanitarian organization, would requirealarge amount of paperwork and repeated contacts with national and local government agencies.
The new guidelines require most activities by the foreign agencies to be cleared with not only the relevant government ministry and local authorities concerned, but also with the so-called Tripartite Core Group, comprising representatives of the government, U.N. agencies and the 10-member Association of Southeast Asian Nations, of which Myanmar isamember.
In response, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies said the humanitarian community was expressing concerns that "additional steps for seeking approval may unnecessarily delay the relief response."
"The meeting was assured by the concerned ministries that this would not be the case and that delays would definitely not beaconsequence of the approval process outlined," the IFRC said inareport issued Wednesday.
Amanda Pitt,aspokeswoman for the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, said atapress conference in Bangkok, Thailand, that U.N. agencies were currently assessing the new guidelines.
At the same press conference,aspokesman for the United Nations Population Fund said pregnant women in the cyclone-affected areas of Myanmar were facing increased health risks.
The maternal mortality rate in Myanmar even before the storm was 380 per 100,000 births _ almost four times the rate in neighboring Thailand and 60 times the rate in Japan, said William A. Ryan.
More than 100 women give birth every day in the area affected by the cyclone, he said.
"The destruction of health centers and loss of midwives have greatly increased the risks," said Ryan. "It is clear that many pregnant women do not have anywhere to go to deliver with skilled assistance."
He said the wrecked health facilities need to be rebuilt, with the capacity to handle emergency obstetrics.
Ryan said that compared to many other countries, Myanmar hasafairly high number of births attended by midwives _ but the comparison is to other countries that are desperately poor.
Foreign aid organizations have facedaseries of hurdles in trying to provide help for victims of the May 2-3 storm, starting with the government's reluctance to grant anything butahandful of visas to foreign helpers.
U.N. Secretary-General Ban Ki-moon last month traveled to Myanmar to meet with the chief of the ruling junta, Senior Gen. Than Shwe, who agreed to allow aid workers into the affected area "regardless of nationality," according to Ban. The general also agreed to allow the U.N. to bring in 10 helicopters to fly supplies to the hard-hit Irrawaddy delta.
Although the helicopters have been allowed in _ with some delay _ aid agencies say the government has continued dragging its feet over visa applications and allowing foreigners access to the most devastated areas.
The U.N. estimates that Cyclone Nargis affected 2.4 million people and that more than 1 million of them, mostly in the Irrawaddy delta, still need help. The cyclone killed at least 78,000 people, according to the government.
Although the government says the relief operations have now reached the post-emergency, recovery phase, aid agencies are concerned that many people still are lacking necessities.
"What we're concerned about is premature returns to areas where the services are not yet inaposition to be used, to try and make sure we can reach people the best we can no matter where they are," said the U.N.'s Pitt.
France Hurtubise of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies said providing shelter remainsapriority. According to the organization, only 107,000 of some 341,000 households had received shelter kits, which are supposed to include two tarpaulins each.
Aid agencies project that tarpaulin supplies will fall short of demand in the coming weeks, in part because of the competing need for such supplies for victims of China's May 12 earthquake.
Burma tightens the regulations on relief organisation
Burma's military government makes more difficult the cyclone relief efforts by the UN organisation sand NGO.
Aid agencies are advised to have permission from the tripartite group, which is formed by the United Nation, ASEAN countries and Burma, before they do any kind of relief work. Meanwhile, aid agencies are facing shortages of food and shelter for victims of the deadly cyclone which ravaged Burma last month, relief workers and United Nations officials said on Wednesday. U Min Htet covered UN press conference held in Bangkok.
Foreign aid agencies concerned over new Myanmar gu...